Jose Mourinho oo ka dhawaajiyay talaabo aysan ku faxin taageerayaasha Man United
Sunday, May 27th, 2018 - 12:37:11
Wednesday September 06, 2017 - 14:48:36 in Wararka by Kubad Bile
Manchester United ayaa ku bilaabatay xili ciyaareydkii labaad iyadoo hoos tageeysa taliska Jose Mourinho.Laakiinse Mourinho ayaanan raadinyen heshiis cusub.
Jose Mourinho ayaa shaaca kaqaaday inuusan dooneen in heshiis cusub oo u saxiixo Manchester United ilaa iyo heshiiskiisa sadaxda sano uu kasoo idlaado.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in tababarihii hore ee Real Madrid uu sii dheereynaayi joogitaanka Old Trafford ka dib markii uu bilaabay xilli ciyaareedka cusub ee kooxda, lakiin 54 jirkaan ayaa iska fogeeyay wararkaas.
Mou ayaa sanadkiisa ugu horeeyay ee kooxda Old Trafford loo diiwaan galiyay inuu yahay macllinka kaliya ee United u suura galiyay kuguulaysiga Europa League.
Ninkaan hadalada kulul ku kaftama xili ciyareydkaan ayaa waxuu kubilowday horyaalka si xoog badan. asigoona taageero xoogan ka helaaya jamaahiirta Old Trafford.
"Kama fakiraayo arintaas. uma baahni qandaraas cusub si aan u shaqeeyo xaduudahayga" Ayuu Jose u sheegay saxaafada.
"Wax dhibaato ah kuma qabo inaan soo gaaro dhamaadka qandarayskayaga. isla markaasnina aan xur u ahaado inaa go'aan kagaaro waxaan rabo inaan sameeyo iyo kooxda inee si xur go'aan ugu gaarto waxee doonayso in ay sameyso"
"Markii hore mar waliba waxaan doonaayay inaa macllin kanoqdo meelo kala duwan. markaan imaado Chelsea(2004) marnaba uma malayn inaa joogaayo 20-sano. marnaba"
"Markaan tagay talyaaniga waxaa mar waliba maskaxda kuhaayay inaan tago Spain. haddi hadda la i weydiiyo waxaan aadi karaa France ama Germany. waxaan dhahaa haa. maxaa diidaaya? Maxaa diidaaya?
"Hase yeeshee. waxaan kujiraa waqtiyo kala duwan mustaqbalka hadda. mar waliba waxaan lahaa Spain iyo Italy inay tahay melaa rajenaayay inaa kashaqeeyo. laakiin ingiriiska waa dareenkayga. waxaan dhihi karaa waqtigaan lajoogo waxaan jeclahay inaa joogo sanado badan"